Fikradan iOS 16 waxay soo bandhigaysaa xarun cusub oo kantarool iyo widgets is dhexgal | IPhone News
Fikradan iOS 16 waxay soo bandhigaysaa xarun cusub oo kantarool iyo widgets is dhexgal ah
Angel Gonzalez | 24/05/2022 12:00 | macruufka 16
Laba toddobaad oo kaliya ayaa naga xiga bilowga barnaamijka WWDC22. Waqtigaas waxaan arki doonaa hababka cusub ee tufaaxa cusub ee la sugayay ee aan ka hadlaynay bilo. IOS 16 waxa ay doonaysaa in ay ku sii wado naqshadeeda ma guurto ah dhowr sano, laakiin waxa ka go'an in ay ku darto hal-abuurnimo shaqaynaysa iyo nidaam wargelin ah oo la hagaajiyay. Iyada oo dhammaan siidaynta iyo dhacdooyinka qaarkood Nicholas Giho uu daabacay a Fikradda iOS 16 oo muujinaysa shaashad quful ah oo la beddeli karo, widgets is dhexgal ah iyo xarun cusub oo kantarool, oo ka mid ah sheekoyin kale oo badan oo aan hoos kaaga sheegayno.
Fikradda ka dib fikradda, waxaan qiyaasaynaa waxa ku cusub iOS 16
Kahor intaadan bilaabin falanqaynta fikradda, waa in la caddeeyo in ay tahay mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee la daabacay ilaa maanta. Is dhexgalka leh mockups iPhone waa mid aad u guul leh iyo sifooyinka la soo bandhigay ayaa si buuxda u shaqeynaya. Aad u xun Apple ma soo bandhigi doono dhammaan wararka, waxay noqon lahayd guul.
Fikraddu waxay ku bilaabataa had iyo jeer waa on, muuqaal in muddo ah la isla dhex marayey. Habkan soo bandhigay had iyo jeer waxay u oggolaan doontaa iPhone in uu haysto shaashadda mar walba laakiin wuu yaraadaa marka iPhone-ku xiran yahay. Sidan ayaan ku heli karnaa macluumaadka iyada oo aan loo baahnayn in shaashadda si buuxda loo shido. Waxa kale oo ka mid ah awoodda ka habee hababka gaagaaban ee abka qaarkood shaashadda qufulka oo leh astaanta hoose.
IOS 16 betas dadweynaha waa la daahi karaa arrimo xasiloonida dartood
Waxaan sii wadeynaa a dib u habeynta dhammaan calaamadaha iOS 16 qaabka ugu saafiga ah macOS. Intaa waxaa dheer, suurtagalnimada in lagu daro Maktabadda App-ka ee ku taal dooxada ee iOS. Mid kale oo ka mid ah waxyaabaha cusub ee aan ka fileyno iOS 16 (oo aan aaminsanahay inaan ku heli doono nooca ugu dambeeya ee Apple) waa widgets is dhexgal, walxaha ku yaal shaashadda qufulka oo aan la falgeli karno. Tusaalooyinka iyaga ka mid ah: la falgalka dib-u-ciyaarista, barnaamijka caafimaadka iyo in ka badan.
Sidoo kale waxaa ku jira a xarunta cusub ee kantaroolka baabi'inta shabakadaha 1 × 1, furitaanka suurtagalnimada in la isku daro walxo kala duwan oo leh cabbirro kala duwan sida iftiinka 4 × 1. Xaruntan xakamaynta waxay aad ula mid tahay tan macOS, eeg oo waad arki doontaa. Ugu dambayntii, saddex isbeddel oo yaryar ayaa la isku dhex daray, sida suurtagalnimada in la xannibo apps-yada qaarkood, ogaysiinta faragelinta yar ee ah in baytarigeennu gabaabsi yahay, iyo habka xusuusta ee xisaabiyaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 16 » Fikradan iOS 16 waxay soo bandhigaysaa xarun cusub oo kantarool iyo widgets is dhexgal ah
Sebastian Vettel ayaa eryanaya mooto tuuggii xaday AirPods-kiisa isaga oo uga mahadcelinaya barnaamijka "Search"
Wuxuu lumiyaa Apple Watch gudaha Disney World waxayna kaarkiisa ku bixiyaan $40.000